१२ बर्षिय सम्झनालाई त्रिशूलले हा’नेर मा’रेको खुलाशा! – PathivaraOnline
Home > समाचार > १२ बर्षिय सम्झनालाई त्रिशूलले हा’नेर मा’रेको खुलाशा!
admin September 30, 2020 समाचार	0
धनगढी-बझाङकी १२ बर्षिय सम्झना कामीका ह,त्या आरोपी राजेन्द्र बोहराले ह,त्या आफैँले गरेको स्वीकार गरेका छन्।उनले मन्दिरभित्र रहेको त्रिशूलले हि’र्काएर सम्झनाको ह,त्या गरेको मंगलबार राती स्वीकारेका हुन्। यसअघि अप,राध स्विकार नगरेका राजेन्द्रले मंगलबार राती ह,त्या गरेको स्विकार गरेको बझाङ प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काले बताए । उनका अनुसार मंगलबार बेलुका पत्रकार सम्मेलन गरिसकेपछि राजेन्द्रले आफैँले ह,त्या गरेको स्वीकार गरेका छन्।
डिएसपी खड्काले भने-‘ह,त्या आरोपित राजेन्द्र गयराति ह,त्या गरेको स्वीकार गरेका छ्न् । उनले सम्झनाको ह,त्या आफूले त्रिशूलले हानेर गरेको र उक्त हतियार मन्दिर छेउको एउटा रूखको जरामा लुकाइएको छ भनेर बयान दिएका छन् । अहिले उक्त हतियार सहित घटना स्थलमा खटिएको सीआईबीको टोली चैनपुर आउँदैछ ।’
ह,त्यारा सार्वजनिक भएसँगै सम्झनाका आफन्तले पनि शव बुझेका छन् । ह,त्या भएको ८ दिनपछि आफन्तले जिल्ला अस्पतालबाट शव बुझेका हुन् । जिल्ला अस्पतालबाट सम्झनाको शव बुझ्दै गोरख कामीले दोषीलाई कारबाही हुन्छ भनेर आफूहरूले शव बुझेको र अदालतबाट फैसला नहुँदासम्म सम्झनाको न्यायका लागि संर्घष जारी राख्ने बताए।
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयका सचिवले फोन मार्फत बालिकाका आफन्तलाई १० लाख रुपैयाँ दिने बताएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी रामबहादुर सार्कीले बताए। मंगलबार अबेर पीडित पक्ष र प्रशासन वीचको छलफल पछि क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकार संग अनुरोध गर्ने र घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान जारी राख्ने सहमति भएको थियो । यस सहमति पछि शव बुझ्न आफन्त सहमत भएका थिए।
गत बुधबार साँझ घरबाट गोठमा गाईभैंसी बाध्न हिँडेकी सम्झनाको गोठ पुग्न नपाउँदै बीच बाटोमै ह,त्या भएको थियो । सम्झना मष्टा निमाविको कक्षा ६ मा अध्ययन गर्थिन्। घरकी ठूली छोरी सम्झना हजुरबुवा र हजुरआमासँग बस्दै आएकी थिइन्। उनको आमा बाबु रोजगारीका लागि भारतमा रहेका थिए । सम्झनाको ह,त्या लगत्तै देशका बिभिन्न ठाउँमा दोषिलाई कार्वाहीको माग गर्दै आन्दोलन भईरहेको छ ।देश सञ्चार बाट
प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश